देशभरको मौसम कस्तो छ, कहाँ कत्तिको पानी पर्छ ? – AB Sansar
September 26, 2020 adminLeaveaComment on देशभरको मौसम कस्तो छ, कहाँ कत्तिको पानी पर्छ ?
काठमाडौँ – देशभरको मौसम क्रमिक सुधारको क्रममा रहे पनि देशका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भइ पानी पर्ने सम्भावना भने रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
शनिबार दिउँसो प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रही केही स्थान तथा प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रही एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । प्रदेश १ र प्रदेश २ का एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत संभावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् ।
देशैभरिका सम्पुर्ण नागरिकहरुका लागि एकाबिहानै सरकारबाट आयो अत्यन्तै खुसिको खबर !